အကောင်းဆုံး 2004 ခုနှစ်ကတည်းကကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဖိုရမ်
ပိုပြီး ...အများစုမှာနိုင်စွမ်း phpBB 4.3 XTE
အကောင့်တစ်ခုအမည်အား (သင့် subdomain) ထုတ်ဖို့မရှာနှင့်သင့် e-mail လိပ်စာထားတော်မူ၏။ သင့်ရဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူ password ကိုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားရမည်။ ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှ spam များကိုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာသင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးအပေါငျးတို့သက e-mail ကိုသင့်ရဲ့ spam များကို folder ထဲမှာသင့်ရဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူစကားဝှက်ကိုသုံးပြီးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဖိုရမ်တစ်ဆွေးနွေးမှုသို့မဟုတ်အသိပညာပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်အကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်များသောအားဖြင့်အဓိကကိစ္စရပ်များတွင်ပထမဦးဆုံးအကူအညီမတတ်နိုင်ပေမယ့်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုအထူးသဖြင့်အင်တာနက်ကိုယဉ်ကျေးမှုအဘို့အရေးကြီးလှသည်မှတပါး။ က hosting ဖိုရမ်များမှကြွလာနှင့်သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လာသောအခါ, ကျနော်တို့ဖိုရမ်များများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဂရုစိုက်လွတ်မြောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အလွယ်တကူခိုလှုံပါ၏။ အခမဲ့ယခုပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်တစ်ခု Register! 2004 ခုနှစ်မှစ. ကျွန်တော်တစ်ဦးအခမဲ့ဖိုရမ် hosting အတွက်အဖြစ်တက်ကြွစွာဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေရာတွင်သငျသညျထက်နည်း2မိနစ်မှာ set up နှင့်စိတ်ကြိုက်နိုင်သည်ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့ဖိုရမ်ရ။ သင်တို့သည်နောက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာလိုအပ်ပါတယ်နှငျ့သငျအကြောင်းအရာနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုဂရုစိုက်, စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ရန်သင့်သိမ်းဆည်းချက်တွေကို, ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ, နောက်ဆုံးသတင်းများ, လုံခြုံရေး, etc စရာမလိုပေ!
Account Name ကို [a-z နှင့် 0-9]: .webforum.eu
ဖိုရမ်တစ်ဆွေးနွေးမှုသို့မဟုတ်အသိပညာပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်အကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်များသောအားဖြင့်အဓိကကိစ္စရပ်များတွင်ပထမဦးဆုံးအကူအညီမတတ်နိုင်ပေမယ့်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုအထူးသဖြင့်အင်တာနက်ကိုယဉ်ကျေးမှုအဘို့အရေးကြီးလှသည်မှတပါး။ က hosting ဖိုရမ်များမှကြွလာနှင့်သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လာသောအခါ, ကျနော်တို့ဖိုရမ်များများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဂရုစိုက်လွတ်မြောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အလွယ်တကူခိုလှုံပါ၏။ အခမဲ့ယခုပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်တစ်ခု Register! 2004 ခုနှစ်မှစ. ကျွန်တော်တစ်ဦးအခမဲ့ဖိုရမ် hosting အတွက်အဖြစ်တက်ကြွစွာဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေရာတွင်သငျသညျထက်နည်း2မိနစ်မှာ set up နှင့်စိတ်ကြိုက်နိုင်သည်ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့ဖိုရမ်ရ။ သင်တို့သည်နောက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာလိုအပ်ပါတယ်နှငျ့သငျအကြောင်းအရာနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုဂရုစိုက်, စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ရန်သင့်သိမ်းဆည်းချက်တွေကို, ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ, နောက်ဆုံးသတင်းများ, လုံခြုံရေး, etc စရာမလိုပေ! စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား Imprint ထံမှသက်ဆိုင်ပါသည်။